Odayaasha Madasha Wadatashiga Oo Sheegay In Dalka Ay Ka Jiraan Dastuur Jabin Baahsan iyo Dhaarta Kitaabka Oo Aan Laga Baqayn
Hargeysa(hoombaronews)- odayaasha madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dastuur jabin baahsan, isla markaasna guud ahaanba aan dalka lagu dhaqmin dhaarta kitaabka ah ee dastuurka ku qoran, islamarkaana loo baahan yahay in sharciga iyo dastuurka dalka loo laabto.
Odayaasha madasha ayaa shaaciyay in loo baahan yahay in sida loo dhaartay ee dastuurka ku qoran in dadka iyo dalka loogu shaqeeyo oo meesha laga saaro dastuur jabinta iyo sahashiga kitaabka alle ee lagu dhaaranayo. waxaanay sidan ku sheegeen shir jaraa’id oo ay warbaahinta ku siiyeen Hargeysa.
Prof.Cabdisalaan Yaasiin oo ka hadlaayay shirkan jaraa’id ee odayaasha madashu ay wada jir ay u qabteen ayaa sheegay in dhaartii layska ilaalway kadib markii lagu dhaartay, waxaana isaga oo arintan ka hadlaayay uu yidhi “Dhaartu waxay leedahay qiimo weyn oo aan macno oo kaliyaata aan ahayn ee uu qofku ka baqanaayo, inagu xiligan aynu joogno waxay noqotay in inta la dhaarto oo kitaabkii inta gacan la saaro in maalin walba dastuurkii la jabinaayo oo lagu tumanaayo, oo nimankii ku dhaartay ku tumanayaan oo aan loo hogaansamayn taasina waxay ku tusaysaa in aynaan akhlaaqdii ,dawladnimadii, dhaqankii aynu doonaynay intiiba aynu ka been sheegnay ileen inta aynu dhaarnay oo aynu nidhi sinaan, cadaalad iyo dalka in la hagaajiyo ayaan ku dhaaranaynaa intii oodhanba waxana arkaynaa in lagu gafay, arinkaas dhaarta waxaanu kula dardaarmaynaa waar alle ka yaaba oo dhaartaas aad gasheen ilaaliya oo dhamaanteen aan ilaalino nin waliba halkii ay kaga soo beeganto hala ilaaliyo.” Sida oo kale Eng.Maxamed Xaashi Cilmi ayaa ka haday sharcijabinta ay ku fadhiyaan xildhibaanada baarlamaanka ee mudo dhaafay waxaanu sheegay in aan dastuurka dalku ogolayn qaabka mudo kordhinta loogu sameeyay isla markaasna ay yihiin kuwo mushaharaad aan xalaal ahayn u xaadira. “ Intii la kordhinaayay waxay marayaan dhawr iyo toban sanadood, waa sharci daro oo waxay ka talaabsandeen sidii sharcigu dhigaayay, waxa ay ka dheefaan maxuu noqon karaa, waa xaaraan, maalinta shanta sano u dhamaato in laga jaro ayay ahayd mushaharka hadii ay doorashadu dhici waydo., isku shaqaysigaas qoloba qolo u kordhinayso ayaa dalkii dilay, waxaanu dadweynaha ku baraarujinaynaa in loo noqdo waxii aan kala qoranay sida uu doonaba ha ahaadee tiina ma jirto.” Prof.Cabdisalaan Yaasiin ayaa mar kale sheegay in aan dastuurka iyo xeerarka dalka aan lagu dhaqmayn “ Dhibaatada ina haysataa waxa weeye dhastuurkii aynu dhiganay iyo xeerkii ku dhaqmi mayno dheertii ilaalin mayno, qaab dhismeedkii dawladnimada ee aynu dhisanay ma xurmaynayno.”